Odessa - chimwe chezvinhu mukurumbira nzvimbo guta muUkraine. Study muUkraine
The Guta Odessa Kazhinji kunzi “The Pearl kweGungwa Dema“. Odessa ndiro guta rakanaka riri Sea Black pamhenderekedzo rinonyomba nzvimbo inokosha mumwoyo vokuRussia uye Ukrainians. Kushanyira Odessa chokwadi kuti kusiyana kushanya kune dzimwe guta. Kusiyana nemamwe maguta yaimbova Soviet Union, Odessa akapfuma Western mutsika European. Odessa anozivikanwa munyika yose nokuda kwayo unyanzvi uye tsika uye ane, chii chiri kuonekwa, Wechipiri yakaisvonaka uye inokosha Opera imba munyika.
Vagari Odessa riri pamusoro 1.1 miriyoni. Ndicho guta siyana pamwe 150,000 vashanyi nerimwe gore kubva munyika yose. Muzhizha, Ivo kutandara pamwe chete jecha pamhenderekedzo Odessa mahombekombe wozvionera ichi guta nokusingaperi muduku. The mahombekombe kubvumira vashanyi kunzwa sokuti vari Mediterranean. Vose kumahombekombe Odessa ari vakamiswa pamwe dzakakurumbira mahombekombe. Muzhizha vari akazara nevasikana akanaka, mumhanzi, uye vashanyi zvakabudiswa zvinonaka chikafu. Chimwe chezvinhu dzakakurumbira mahombekombe ndiro Arcadia Beach, riri pamusoro 10 maminitsi kubva Downtown.
Kufamba Odessa unogona kuona nhoroondo yaro kubva dzenhoroondo Italian zvinofurira kuti kweSoviet furati zvivako. On Deribasovskaya Street – huru mumugwagwa – pane zvakasiyana-siyana mumaresitorendi, dzemitambo, Concerts uye promenade vanhu. Chengarava Odessa ane ngarava rose kusvika zuva
Odessa ane 1185 migwagwa, 62001 zvivako, 24 Hotels, 34 dzidzo masangano, 88 utano nzvimbo, 20 mamiziyamu. Public zvokufambisa Odessa guta kunosanganisira 21 chitima migwagwa, 15 trolley bhazi migwagwa, 47 bhazi migwagwa uye 35 nemakombi migwagwa.
Odessa ndiro 3rd pakukura guta muUkraine, chinonyanya kukosha guta hwekutengeserana uye 2nd guta rakakurumbira nokuda toerisme muna Ukraine.It ndiye ndiro guta achitevedza rose Sea Black. Makore mazhinji akapfuura, Odessa aimbova, pashure Moscow uye St. Petersburg, 3rd vaitungamirira zvokutengeserana guta muRussia rekare. Odessa ndiye inokosha chengarava muUkraine. Yayo yakanaka chiteshi muGungwa Dema, Odessa ava Ukraine wokumaodzanyemba hwindo kuEurope uye nemagariro muzinda unokosha.
Kuwedzera kukosha chengarava, mumaindasitiri guta zvinosanganisira chikepe chivakwa, mafuta achinatsa, makemikari, simbi vanoshanda uye chikafu kugadzira. Odessa ndiyewo kumba wengarava nechimwe wokuUkraine uye fleets zhinji hove.
Odessa riri pamusoro yakabatana zvikomo yakatarisana chiduku chiteshi. Kunze munyoro uye nebvudzi avhareji tembiricha muna January 29 F uye 73 F muna July. Odessa Avharenji chete 35 masendimita (14 mu) pamusoro kunayisa gore negore. Odessa ane kuchirapa plesieroorde zhinji. Modern Odessa iri kuvakwazve guta pacharo, uye Downtown kwayo zvishoma nezvishoma kuitwa vavazve nesimba.
Odessa anotarira zvakawanda seguta iri Mediterranean, wavakanga ndashandisa kufurirwa French uye Italian mapurani zvekunyanyisa. Odessa agara anazvo mweya rusununguko, zvimwe akapa nemano ayo kugamuchira marudzi mazhinji akasiyana. Guta kuramba nemitambo Exhibits, symposia, uye Conferences. Ndiyo nzvimbo CONSULATES uye dzaishandiswa mishoni munyika dzakawanda uye dzakawanda tsika Exchange nzanga vari kushingaira muguta.
Guta rine zvakawanda omunharaunda hunhu kupfuura dzimwe guta upi muUkraine. Vanhu Odessa vane akakurumbira chaizvo nokuda kwavo unopinza zvaiti uye canny zvokutengeserana mano. The vashanyi dziri nokukwezvwa Odessa kuti yevedza boulevards, ari 200 Nhambwe Potyomkin kuti masitepisi, nepagungwa njanji, yakanaka jecha mahombekombe pamwe kweGungwa Dema, zvitoro, Restaurants, wanda hurongwa itsva, uye kujairika chaiwo mavakirwo Odessa akare. The namaapuro Potyomkin kuti masitepisi pave kuoma zvingori mumaziso kuita matanho sokuti kurei kupfuura zvavo chaiwo. Okumusoro ndege vari 44.22 tsoka (13.4 mamita) rakafara apo dzakaderera ndege vari 71.28 tsoka (21.6 mamita). The masitepisi’ zita wakabviswa chigadzirwe Potyomkin uye kwaifanira kungoyeukwa muna yakakurumbira firimu zita kuti wokuRussia mugadziri Sergei Eizenstein.